Usmanhodzhaev Inamzhon Buzrukovich - उज्बेकिस्तान को कम्युनिष्ट पार्टी को पहिलो सचिव
Usmanhodzhaev Inamzhon Buzrukovich पहिलो सचिव थियो कम्युनिस्ट पार्टी को केन्द्रीय समिति 1983 को अन्त्यमा उज्बेकिस्तान को र 1988 को सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले निकै पहिलो राष्ट्रपति इस्लाम Abduganievicha Karimova को पोस्ट गर्न पदोन्नति गर्न योगदान भएको लागि प्रसिद्ध छ। यो उज्बेकिस्तान सोभियत अवधिको भन्दा नाउँ चलेका राजनीतिज्ञ को एक को जीवनी जाँच्न गर्नुपर्छ, कसरी देशमा जीवन खोज्न, र मा भ्रष्टाचार को हदसम्म आकलन गर्न बुझ्न "कपास देश।"
Usmanhodzhaev Inamzhon Buzrukovich: जीवनी र रोचक तथ्य
जन्म भविष्यमा नीति गणतन्त्र को इतिहास मा कठिन समयमा मा परे। देश भोक र भयंकर दमन gripped थियो त्यो, मे 1930 मा जन्म भएको थियो। केटा परम्परागत उज़्बेक परिवार मा, Fergana शहर मा भयो। उच्च स्कूल पछि, जवान Inamzhon एक इन्जिनियर रूपमा मास्को विश्वविद्यालय प्रवेश गर्ने निर्णय गरे। तर, उच्च प्रतियोगिता गर्न उहाँले यो संकाय मा जान सक्छ।
एक वर्ष पछि, त्यो केन्द्रीय एशियाली पलिटेक्निक संस्थान (अब ताशकहरुट राज्य प्राविधिक विश्वविद्यालय) मा भर्ना गर्न सक्षम थियो। उहाँले प्रसिद्ध सोभियत architect Sabir Rakhimovich Adylov साथ सँगै एउटै विभाग मा जवान अध्ययन। 1955 मा उनले संस्थान देखि स्नातक। र 1958 मा उनले कम्युनिस्ट पार्टी को सदस्य भए।
Usmanhodzhaev Inamzhon Buzrukovich सबैभन्दा प्रतिभाशाली ईन्जिनियरहरु को एक मानिन्छ। उहाँले एक निर्माण कम्पनी साइट "Ferganavodstroy" को टाउको थियो। आधिकारिक पनि उच्चारण रचनात्मक क्षमता, आफ्नो प्रतिभा र डिजाइन ईन्जिनियरिङ् को लागि धन्यवाद, Margilan शहर को मुख्य architect नियुक्त गरियो थियो, र।
राजनीतिक गतिविधिहरु Usmanhodzhaev Inamzhon Buzrukovich कम्युनिस्ट पार्टी सामेल पछि लगभग तुरुन्त थाले। उहाँले दस वर्ष (1962 देखि 1972-औं गर्न) को लागि आयोजित पहिलो स्थिति, धेरै मूल्यवान राजनीतिक स्कूल भएको छ। उहाँले Ferghana को शहर परिषद को अध्यक्ष र थियो Ferghana क्षेत्र, र त्यसपछि Syrdarya क्षेत्रमा क्षेत्रीय समिति सचिव। यो स्थितिमा, कम्युनिस्ट पार्टी को धेरै वरिष्ठ अधिकारीहरु संग उहाँले थाह भयो छ।
अर्को नियुक्ति 1972 मा भयो। उहाँले Namangan मा क्षेत्रीय कार्यकारी समिति को अध्यक्ष निर्वाचित भएको थियो। 1974 मा उहाँले Andijan को क्षेत्रीय समिति को पहिलो सचिव नियुक्त गरियो। 1978 मा, आधिकारिक आफ्नो परिवारका साथ राजधानी सारियो। धेरै काम लागि उज़्बेक गणतन्त्र को सर्वोच्च सोभियत को Presidium अध्यक्ष नियुक्त गरियो। 1983 को अन्त सम्म, उहाँले उप अध्यक्ष रूपमा सेवा गर्ने सोभियत संघ को सर्वोच्च सोभियत।
उज्बेकिस्तान को कम्युनिष्ट पार्टी को सचिव को स्थिति
नोभेम्बर 1983 मा, xvi Plenum Usmanhodzhaev Inamzhon Buzrukovich (जो को फोटो माथि हेर्नुहोस्) मा उज्बेकिस्तान को कम्युनिष्ट पार्टी को केन्द्रीय समितिको पहिलो सचिव निर्वाचित भएको थियो। हाम्रो नायक Sharafa Rashidovicha Rashidova रूपमा बदलिएको थियो। उहाँले, किनभने सनसनीपूर्ण को आत्महत्या समाप्त इतिहासकारहरूले द्वारा भने "एक कपास र कामहरू।" यो कि कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको पूर्व सचिव ज्ञात छ Rashidov Sharaf, लियोनिद Brezhnev धेरै समान थियो। उहाँलाई धन्यवाद, यस्तो लिंक लामो समय कपटपूर्वक कपास को संग्रह को रेकर्ड संग ट्याम्पर लागि सम्भव थियो।
तथापि, Andropov शक्तिमा आउँदै संग, आफ्नो स्थिति नाटकीय परिवर्तन भएको छ। यूरी Rashidov चाँडै कटनीको निरीक्षण नियन्त्रण गर्नेछ भन्ने चेतावनी telephoned। Sharaf Rashidovich यो मा सबै भन्दा राम्रो, जीवन वाक्य गर्न निन्दा गरिनेछ राम्रो भनेर पूर्ण थाह, त्यसैले उहाँले मास्को देखि प्रमाणिकरण लागि प्रतीक्षा बिना मर्न निर्णय गरे।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले गणतंत्र को भाग्य मा प्रभावित कि घटनाहरू थुप्रै मा केन्द्रीय आंकडा, Usmanhodzhaev Inamzhon Buzrukovich थियो भन्ने विश्वास गर्छन्। उज्बेकिस्तान जब यो सबैभन्दा भ्रष्ट गणतन्त्र, जहाँ शक्ति र धन को वितरण को कुल सिस्टम आधारभूत भूमिका हासिल गरेको छ को एक भए।
यो 1983 मा भविष्यमा राष्ट्रपति इस्लाम Abduganievicha Karimova को वित्त मंत्री को पोस्ट लागि नामांकन सुरु गर्ने उहाँले थियो। साथै, यो हदसम्म Karimov समर्थित र सरकार एजेन्सीहरू अन्य सदस्यहरूको जस्तै उहाँलाई संग प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्दा कहिल्यै।
के प्रभाव यो देश को विकास मा थियो?
सोभियत समयमा, नाम Rashidov ठगी र भ्रष्टाचार को अवधारणाहरु संग सम्बन्धित। एक Inamzhon Buzrukovich यसको पूर्ववर्ती whitewash एउटा छोटो समय मा सक्षम थियो। उहाँले लगभग5लाख rubles खर्च जो राज्य Jewels, गर्न दिन Rashidov र उदार प्रस्तावको गतिविधिहरु मा छानबिन अप चुप लाग् गर्न व्यवस्थित। यस्तो राशि एक विशाल रूपमा मानिन्छ थियो र कोषको एउटा उत्कृष्ट आय रूपमा सेवा गर्न सक्छ। गर्भवती भ्रष्टाचार र उपकरणहरू सार्वजनिक अधिकारीहरु को घूसखोरी बाहेक shamelessly यस्तो लेनदेन गए।
इतिहासकारहरु अस्पष्ट गतिविधिहरु Inamzhona अनुमान। ती सबै उहाँले उज्बेकिस्तान को कम्युनिष्ट पार्टी को केन्द्रीय समितिको पहिलो सचिव को पोस्ट आयोजित जब वर्ष पछि, देश मा राजनीतिक र सामाजिक अवस्था बिग्रन थाल्यो। उहाँले अधिकारीहरु आफ्नो मान्छे देखि विशाल रिश्वत, र धेरै शुल्क को खर्च मा राम्रो-हुनुको सुधार गर्न थाले भन्ने तथ्यलाई दिनुभएन।
Usmanhodzhaev Inamzhon Buzrukovich: मेरिट को पुरस्कार
गतिविधिहरु Usmanhodzhaeva Inamzhona अत्यधिक विवादास्पद छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद, उहाँले "सम्मान ब्याज" (1965) सहित धेरै पुरस्कार, संग सम्मान थियो, "श्रम रातो ब्यानर" (1972 र 1973), लेनिन (1976) र अक्टोबर क्रान्ति (1980) को आदेश। साथै, यो धेरै पदक र प्रमाणपत्रहरू श्रम merits लागि संस्कृति को क्षेत्र मा सोभियत राज्य अघि, साथै राष्ट्रिय जीवनको सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्रहरू मा पुरस्कृत गरियो।
देशको अर्थव्यवस्था मा परिवर्तन को शुरुवात ज्ञात भएको 80s को दोस्रो आधा। इतिहासकारहरूले समायोजन को अवधिमा कल 1985-1989। यस समयमा, देश को टाउको, Usmanhodzhaeva, उजुरी धेरै पाए। र मास्को मा भ्रष्टाचार को लागि उज्बेकिस्तान को CPSU केन्द्रीय समिति को सचिव condemning एक उर्दी जारी। उहाँले सर्वोच्च परिषद बाट कथित कारण अवकाश गर्न, आफ्नो स्थिति देखि 1988 मा हटाइएको र हटाइएको थियो।
धेरै उच्च र्याङ्किङ्ग अधिकारीहरु दोषी र उज्बेकिस्तान को कम्युनिष्ट पार्टी को पहिलो सचिव छन् साथ, 1988 मा सुरु जो छानबिन, समयमा। डिसेम्बर 27, 1989 उहाँले जेलमा 12 वर्ष सुनाइसकेको थियो। तर, त्यो लगभग सबै आफ्नो पुरस्कार र पदक को deprived थियो। मात्र 1990 मा उहाँले जारी भएको थियो र acquitted र पूर्व राष्ट्रपति इस्लाम Karimov को आदेश मा 2016 मा rehabilitated। उहाँले आफ्ना सबै शीर्षक र पुरस्कार फर्के।
निष्कर्ष र जारी गरेपछि उहाँले आफ्नै सुरक्षाको लागि राजनीतिक र सामाजिक गतिविधिहरु छोड्न निर्णय गरे। Usmanhodzhaev Inamzhon जसको छोराछोरीलाई सजाय गरिएको कहिल्यै Buzrukovich, अब आफ्नो बुबाको घरमा, Fergana को आफ्नो पैतृक शहर मा छ। उहाँले प्रिय हजुरबुबा साथ सँगै बस्ने7नातिनातिनी छन्। उहाँले तिनीहरूलाई educates। आफ्नो मुख्य गतिविधि अब - कक्षाहरू यो बागवानी गर्नुपर्छ। उहाँले सुसज्जित छ जो एक सुन्दर बगैचा र एक ठूलो दाखबारी हवेली, छ ज्ञात छ।
हिटलर गरेको जैविक बच्चाहरु - सत्य वा मिथक?
सय वर्ष युद्ध कति लामो?
अलेक्जेन्डर Peresvet। Kulikov युद्ध को हीरो
एक प्रायद्वीप के हो? जो स्थित छ प्रायद्वीप को पूर्व: भारतीय एशिया र Indochina?
विवरण, कथा, समीक्षा र समीक्षा: यस "Marvel" बाट फिलिमहरु को सूची
के यो खेलकुद स्टीयर व्हील स्थापना गर्न यसको लायक छ?
आदेश, को सोभियत संघ र सोभियत इतिहास विभिन्न अवधि मा उच्चतम पुरस्कार
निदान, कारण र उपचार: वयस्क मा Thrombocytopenic purpura
कसरी कन्फिगर गर्न र SSH पोर्ट प्रयोग गर्ने? चरण पुस्तिका द्वारा चरण
परियोजना को कार्यान्वयन को विधिहरू। विधि र कार्यान्वयन परियोजना को उपकरण
आफ्नो हात, सुविधा र लाभ यो प्रक्रियाको संग छत